Amanqaku kaPaul Childs kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Paul Abantwana
UPaul Childs ligqala lobuchwephesha bentengiso elineminyaka engaphezulu kwe-15 yamava okwakha kunye nokukhulisa amashishini eentengiso eziphathwayo kwihlabathi jikelele kwindawo yenkqubo kuyo yonke imfuno kunye necala lokubonelela. Ubambe izikhundla ezininzi zobunkokeli eziphezulu kumanqanaba eVP kunye noC athatha uphuhliso lweshishini, ukusebenza, ukuthengisa, kunye nokuthengisa. UPaul waseka i-Adfonic kwi-2008, eyaba yenye yee-DSP ezihamba phambili ezihamba phambili emhlabeni jikelele. Ngoku kutshanje, uPaul wayeyi-Ofisi eyiNtloko yeRhafu kwi-Smadex, apho wanceda ukukhula kunye nokuphuma kwishishini kwi-Entravision. UPawulos okwangoku uPhuhliso loShishino lweVP kwi MOLOCO.
Buyela kwiSizzle: Indlela abaThengisi be-E-Rhwebo abanokusebenzisa ngayo i-Creative ukunyusa imbuyekezo
Lwesine, Matshi 3, 2022 Lwesine, Matshi 3, 2022 Paul Abantwana
Uhlaziyo lwabucala lwe-Apple lutshintshe ngokusisiseko indlela abathengisi be-e-commerce benza ngayo imisebenzi yabo. Kwiinyanga ukususela oko uhlaziyo lukhutshiwe, kuphela ipesenti encinci yabasebenzisi be-iOS abaye bakhetha ukulandela umkhondo wentengiso. Ngokohlaziyo lwamva nje lukaJuni, ezinye iipesenti ezingama-26 zabasebenzisi behlabathi jikelele bavumele ii-apps ukuba zibalandelele kwizixhobo ze-Apple. Eli nani belisezantsi kakhulu e-US nge-16% kuphela. BusinessOfApps Ngaphandle kwemvume ecacileyo yokulandelela umsebenzi wabasebenzisi kuzo zonke iindawo zedijithali, ezininzi